खबर मलाई, Author at खबर मलाई
Author: खबर मलाई
२२ भाद्र २०७६, आईतवार २२ भाद्र २०७६, आईतवार खबर मलाईLeaveaComment on बाँझोपन बढ्नुको ६ कारण
आधुनिक जीवनशैलीलाई अपनाउने चक्करमा यस्ता गल्ती गरिरहेका हुन्छौ, जसले बाँझोपनको समस्या ल्याउँछ । खानपान, शिफ्ट अनुसारको जागिर तथा रहनसहनमा आएको परिवर्तनका कारण जहाँ एकातिर हाम्रो जीवनको स्तर पहिलाको तुलनामा निकै ठूलो भएको छ, अर्कोतिर आधुनिकीकरणको परिणामस्वरुप पनि थुप्रै प्रकारका स्वास्थ समस्या बढेको छ । अहिले बढ्दो उमेरसंगै लाग्ने रोगहरु युवा अवस्थामै लाग्न थालेका छन् । […]
२२ भाद्र २०७६, आईतवार २२ भाद्र २०७६, आईतवार खबर मलाईLeaveaComment on वास्तुशास्त्रः यी चीजहरु सिरानी मुनि राखेर सुत्नुस्, भाग्य चम्किन्छ
मानिसहरुको जीवन पद्धतिका विषयमा शास्त्रमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । शास्त्रलाई मान्ने हो भने तपाईको जीवनमा आउने बाधा व्यवधान सहज रुपमा हटाउन सकिन्छ । कहिलेकाँही मानिसहरुको जीवनमा धेरै समस्या एकैपटक निम्तिन सक्छन् । तर उनीहरुलाई थाहा हुँदैन कि यसको पछाडिको कारण के हो ? यस्तो अवस्थामा त्यस्ता समस्या समाधानको लागि वास्तुशास्त्रको साहारा लिनु उचित हुने ज्योतिष […]
२१ भाद्र २०७६, शनिबार २१ भाद्र २०७६, शनिबार खबर मलाईLeaveaComment on गर्मीमा शरीरलाई शितल राख्न के-के खाने ?
गर्मीले आजित बनाएपछि मानिसलाई के गर्ने र कसो गर्ने भन्ने हुन्छ। कहाँ शितल होला, के खाँदा शितल होला भन्ने पिरलो सबैलाई हुन्छ। त्यसैले गर्मीका बेला तल उल्लेखित खाने कुरामा ध्यान दिनोस्ः – गर्मीमा पसिना बढी आउँछ। त्यसैले शरीरमा पानीको मात्रा कम नहोस् भन्नका लागि झोल पदार्थ प्रशस्त खानुपर्छ। पानी पर्याप्त खाइएन भने स्वास्थ्य खराब […]
२१ भाद्र २०७६, शनिबार २१ भाद्र २०७६, शनिबार खबर मलाईLeaveaComment on रुघा-खोकी, नाक, कान, घाँटीको समस्या हुनेहरूका लागि यस्तो गर्नुहोस्
रुघा-खोकी तथा नाक, कान, घाँटीको समस्या हुनेहरूका लागि । भान्साघरमा दैनिक उपयोग गरिने बेसार अर्थात् हर्दी केवल स्वाद तथा आकर्षणमा मात्र सीमित छैन, यसले पूरा शरीरको रक्षा गर्छ। – भनाइ नै छ, सर्दीका लागि हर्दी। दैनिक दूधमा बेसार हालेर खाँदा रुघा-खोकी तथा चिसोले सताउँदैन भने आन्तरिक घाउ पनि ठीक हुन्छ। – ईएनटी अर्थात् नाक, कान, […]
२१ भाद्र २०७६, शनिबार २१ भाद्र २०७६, शनिबार खबर मलाईLeaveaComment on बासी भात तताएर खानुहुन्छ ? हुन सक्छ फुड पोइजनिङ, यसरी बच्नुस्
हामी प्रायः खाएर बचेको भात फेरि तताएर खान्छौँ । तर, यसरी बासी भात तताएर खाँदा शरीरलाई ठूलो हानि हुन सक्छ । यो त्यतिवेला हुन्छ, जब हामी चिसो भात तताएर खाँदा आवश्यक सावधानी अपनाउँदैनौँ । बेलायतको नेसनल हेल्थ सर्भिसका अनुसार दोहोर्याएर तताइएको भात खाँदा फुड पोइजनिङ हुन सक्छ । तर, यो खतरा बासी भातलाई तताउनाले होइन, […]
यस्तो छ सुन्दर देखिने युवतीहरुको नयाँ तरिका, किन धाउनु व्युटी पार्लर ?
२१ भाद्र २०७६, शनिबार २१ भाद्र २०७६, शनिबार खबर मलाईLeaveaComment on यस्तो छ सुन्दर देखिने युवतीहरुको नयाँ तरिका, किन धाउनु व्युटी पार्लर ?
व्युटी पार्लर धाउनु, सौन्दर्य प्रसाधन प्रयोग गर्नु खर्चिलो र झन्झटिलो हुन्छ । त्यसमाथि यस्ता कृतिम बिधीले प्राकृकित सौन्दर्य प्राप्त गर्न सकिदैन । बजारमा पाइने सौन्दर्य प्रसाधनले दीर्घकालिन काम पनि गर्दैन । त्यसो भए के गर्ने त ? सजिलो काइदा छ, भान्सको सामग्रीलाई प्रयोग गर्ने । हामीले भान्सामा दिनहुँ प्रयोग गर्ने कति चिज यस्ता छन्, जसले […]
युराे कप छनाेट : बेल्जियम, वेल्स र क्राेएसिया विजयी
२१ भाद्र २०७६, शनिबार २१ भाद्र २०७६, शनिबार खबर मलाईLeaveaComment on युराे कप छनाेट : बेल्जियम, वेल्स र क्राेएसिया विजयी
युरो कप २०२० को अन्तर्गत शुक्रबार राति भएको समूह आई को छनोटमा बेल्जियमले सान मारिनाेविरुद्ध चार-शून्यको सहज जित निकालेको छ । आफ्नो अपराजित यात्रालाई कायम राख्ने क्रममा बेल्जियमले सान मारिनाेलाई खेलको सुरुवातदेखि नै दबाब दिएको थियो । पहिलो ४० मिनेट गोलरहित बराबरी खेलेको बेल्जियमले ४३ औं मिनेटमा अग्रता बनायो । उसका बाट्सुइले पेनाल्टीमार्फत गोल गर्न सफल भए । स्टार […]
मस्तिष्कलाई कसरत गराउने आइडिया !
२१ भाद्र २०७६, शनिबार २१ भाद्र २०७६, शनिबार खबर मलाईLeaveaComment on मस्तिष्कलाई कसरत गराउने आइडिया !
एजेन्सी– स्वस्थ्य मनको असर स्वस्थ्य शरीरलाई सीधा पर्छ । शरीरलाई स्वास्थ्य राख्न स्वस्थ्य मस्तिष्क बनाउनु पर्छ र यसका लागि हामीले दिमागलाई पनि कसरत गराउनु पर्छ । दैनिक मस्तिष्कलाई कसरत गराउँदा हाम्रो मानसिक क्षमता विकास हुन्छ । आफ्नो दैनिक कार्यमा सहज पनि हुन्छ । र, यसका लागि तलका टिप्स सहज हुनसक्छन्ः १. घरेलु सामानको सूची हामीले […]
घरमै गर्न सकिन्छ यी उपचार
२० भाद्र २०७६, शुक्रबार २० भाद्र २०७६, शुक्रबार खबर मलाईLeaveaComment on घरमै गर्न सकिन्छ यी उपचार
आजको व्यस्त जीवनमा हामी अधिकांश कामहरु हतारमै गरिरहेका हुन्छौं । जसका कारण कहिलेकाहीँ हामीलाई सामान्य चोटपटक लाग्न सक्छ । घरमा चकचक गर्ने केटाकेटी छन् भने त हरेक दिन सामान्य चोट लाग्ने निश्चित छ । केटाकेटीहरु खेल्ने मुडमा ध्यान दिएर हिँड्दैनन् । जसका कारण उनीहरुलाई चोट लाग्छ । त्यस्तै घरको कामकाज गर्दा जस्तैः तरकारी काट्दा, सामान […]
सेतो पुतलीदेखि सावधान, आँखाको दृष्टि गुम्‍ने खतरा
२० भाद्र २०७६, शुक्रबार २० भाद्र २०७६, शुक्रबार खबर मलाईLeaveaComment on सेतो पुतलीदेखि सावधान, आँखाको दृष्टि गुम्‍ने खतरा
काठमाडौं : बेलुका राम्रैसँग सुतेका बागलुङ तित्याङका १२ वर्षीय सन्दीप परियारले भोलिपल्ट बिहान बेस्सरी आँखा मिच्न थाले। दाहिने आँखा मिच्दामिच्दै रातो भयो। धमिलो देख्न थाले। उनी आमा सीता झाफुकमा लागिन्। बिसेक नभएपछि पर्सिपल्ट छोरालाई धौलागिरि अञ्चल अस्पताल पु¥याइन्। त्यहाँबाट पोखराको हिमालय आँखा अस्पताल रेफर गरियो। आँखा दुखेको ४ दिनपछि बिहीबार पोखरा आउँदा सन्दीपलाई ‘सापु’ भएको […]